Muzvare Mukoko Vanobvisiswa Mari yeChibatiso
Kurume 02, 2009
Mutungamiri weZimbabwe Peace Project, Muzvare Jestina Mukoko, vapihwa neMuvhuro mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti nyaya yavari kupomerwa itongwe vachibva kumba kwavo.
Mutongi wedare, VaMishrod Guvamombe, vati muzvare Mukoko vanofanirwa kubvisa mazana matanhatu emadhora eku America semari yechibatiso, uye vanofanirwa kuzviisa kumapurisa eku Norton kaviri pasvondo rega rega.
VaGuvamombe vatiwo Muzvare Mukoko vanofanirwa kuisa magwaro avo emba yavo yekuNorton kumatare edzimhosva, uye gwaro ravo rekufambisa. Muzvare Mukoko vakapambwa vari pamba pavo musi wa 3 Zvita gore rapera, vakagariswa vari mhunhapwa pasina anoziva kwavainge vakachengeterwa. Vakazoonekwa vobuda nekumapurisa mushure memasvondo matatu, kunyange hazvo mapurisa airamba kuti akange asingazive kwakachengeterwa Muzvare Mukoko.
Pavakaunzwa mudare, hurumende yakati yaipomera Muzvare Mukoko mhosva yekudzidzisa vechidiki veMDC kuita zvehugandanga. Asi Muzvare Mukoko vari kuramba mhosva yabari kupomerwa.
Muzvare Mukoko vaburitswa muhusungwa mushure mekugara vari muhusungwa kwemwedzi mitatu. Kunyange hazvo Muzvare Mukoko vabvisiswa mari yechibatiso, vacharamba vari muchipatara che Avenues Clinic umo vari kurapwa.
Patience Rusere weStudio7 aita hurukuro nemutori wenhau dzeStudio7, Thomas Chiripasi, uyo anoti Muzvare Mukoko varatidza kufara kukuru pavaudzwa nezvemutongo waVaGuvamombe.
Ukuwo mutongi wedare reHigh Court, Justice Susan Mavangira, vaparura neMuvhuro kutongwa kwemhosva mudare repamusoro muManicaland. Vachiparura hurongwa uhu kwaMutare, Justice Mavangira vati hurumende inofanirwa kugadzirisa zvose zviri kunetsa kubazi rinoona nezvemajere, kuitira kuti kodzero dzevasungwe dziremekedzwe.
Vatiwo hurumende inofanirwa kuwanirawo bazi iri dzimotokari, pamwe nemafuta edzimotokari. Vakurudzirawo kuti kwaMutare kuve nemutongi anogara achitonga mhosva dzemudare repamusoro, sezvinoitwawo kuHarare nekuBulawayo.
Sekutaura kuri kuita mutori wenhau weStudio7, Loirdham Moyo, magweta anoshanda ari muManicaland atambira kurudziro yaJustice Mavangira nemufaro, achiti yasvika nguva yekuti dunhu iri rive nemutongi wemhosva dzinopinda mudare repamusoro.
Nyaya Ina Patience Rusere naThomas Chiripasi